Post kacaanka casriga ah, iibsashada barnaamijyadooda Android ayaa kaliya noqday badan oo dhan fudud. Marka gadashada ku saabsan tahay music , waxaan ka heli barnaamijyadooda Android on telefoonada Android aad u anfacaya.
9. Gantaal Player
Top10 Android Apps si ay u iibsadaan muusikada:
App Tani waa ineey app ugu wanaagsan ee Android u soo iibsan music internetka oo aad loo jecel yahay ka mid ah dadka isticmaala ay.
Gadashada music la DoubleTwist:
App wuxuu qabaa liiska buuxa album in laga arki karo dhinaca bidix ee shaashada Android. Ka mid ah fursadaha sida Qaasaali iyo Artists Dooro ka dibna sii soco ilaa download song / s on iibsiga.
Faa'iido: Iyadoo app waxa aad ka muuqan waafajinta karaa music dhexeeya Lugood iyo Android. Waxay leedahay 5-star rating oo uu leeyahay waafajinta balaadhan oo si qaabab audio kala duwan.
Qasaarooyinka: app aasaasiga ah waa FREE; laakiin shaqeynta buuxda ee app wuxuu la iman doonaa ay version iibsaday.
. ★★★★★ Si fudud ugu fiican raadinaya ciyaaryahankii ugu music on android
★★★★★ Tani waa si uga wanaagsan ee "dhisay-in" music ciyaaryahan la timid aan telefoonka.
★★★★★ maxay sababta aan ku dhibtooday Google Music waayo, sidaas dheer waa iga baxsan. Jeclaada app this. Dhexgalka Great la Lugood. La soco hawsha wanaagsan.
Si aad noo soo baxay waa app labaad ee ugu fiican Android iibsashada muusikada.
Gadashada music la Poweramp:
app waxay leedahay dhamaystiran albums midig dhinaca bidix ee shaashada Android la sawiro Ghadafi. Mid ka mid ah oo aad jeceshahay Dooro iyo raac tallaabooyinka waxaa lagu xusay in hab user saaxiibtinimo.
app waxay bixisaa dabacsanaan dhamaystiran marka la eego theme iyo farabadan oo uga faaidaysan saldhigyada.
app waxay bixisaa 15days maxkamad FREE la post shaqeynta buuxda oo aad leedahay si aad u soo iibsadaan.
*** Fadlan ha isku dayin inaad cusboonaysiiso haddii aad soo iibsatay Unlocker goobta Poweramp, sida Google Play Unlocker ma aha isku mid. Just sii Unlocker aad hadda sida uu yahay.
Baahida shaqada xuduud la yaab leh qaro weyn agagaarka farshaxanka album, zooming size Waxba tari mayso, oo badhamada barbaraha iyo jawiga waa suurtogal in ay arkaan in ka badan light farshaxanka midab. Dhab ahaantii u baahan yahay shaqo dheeri ah, ayaa laga yaabaa wanaagsan, laakiin sida ay tahay, oo ay yara kharriban!
Woobie la shaqeeyo ilaa dhawaan maqaarka updateGreat laakiin la update dhawaan aanan mar dambe u isticmaali kartaa. Waxaan ahay on Sony Xperia SP, android 4.4.
Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu cadcad ee ka mid ah kuwii ku caashaqi jiray music iyo waxaa si weyn u isticmaala dadka dunida ku baahsan.
Gadashada music la Google Play Music:
Dhinaca bidixda aad screen Android waxaad ka heli kartaa fursadaha sida Dhagaysta hadda, My Maktabadda u soo qaado oo uu ka soo xusho sida likings aad. Raac tallaabooyinka fudud ee ku qeexan ah user saaxiibtinimo hab.
app ayaa ku soo beegmay FREE la telefoon kasta Android oo bixiya maktabad daruur u weyn.
Si ka duwan Poweramp app taasi ma bixiyaan dabacsanaan badan u Customization ka mid ah goobaha iyo mawduucyada.
Fadlan hagaajin! Waxaan u xiisooday ayuu app tan iyo markii aan bilaabay isticmaalaya helaan aan xad lahayn oo u sheegay saaxiibo badan oo ku saabsan. Laakiin iyo weyn, laakiin waxaan mar dambe ma bixi kartaa music. Fadlan hagaajin !! Ma aan arki karo bixinta bil kale marka anigu ma heli karo music cusub. Tani waa app kaliya ee aan si dhab ah u bixiyaan.
mar walba ma shaqeeyaan ma aha radio bixi ama streamable ciyaaro. * Version cusub: Weli dhibaato marmar. Yar la updates cusub, laakiin weli arrimaha marmar. La joojiyo ka dib markii aan $ 3 3 bilood oo heshiis ku eg. Waxaan noqon lahaa macmiilka haddii dhib yar
Gapless play guuldareystaan ​​Spotify sameeya play gapless on my telefoonka, oo ay app yahay si ka badan u wacan si ay u isticmaalaan. Sidaas waxaan bedesheen. Google ayaa loo sheegay oo ku saabsan arrinta la play gapless muddo sanado ah. Iyagu ma muuqdaan in ay daryeelaan.
Well ok waxaan jeclaan music ciyaaryahankaan laakiin i lacag ka qaadaan kaarka hadiyadda dukaanka play iyo markii aan isku dayay in ay soo iibsato music aan xad lahayn app wuxuu i siin qalad ah in aan purichase iyo in kaarka si cad u dheh "i bixin kartaa subcriptions ee google muusig iyo news laakiin ma subcription kale ": c (laakiin la kaarka ugu dambeyntii i soo iibsado kulan oo camal)
App Tani waa fiicnaa markii qaar ka mid ah suuqa ugu jirta arrin.
Under Album tab ee ka dooro mid aad oo raac talaabooyinka waxaa lagu xusay in hab user saaxiibtinimo.
Faa'iido: app ayaa ku soo beegmay iyada oo dalab labo waji ah audio iyo video ciyaartoy badan oo ka mid ah muuqaalada damcay sida taageero maqaarka iyo 10 urur barbaraha graphic.
Qasaarooyinka: app ayaa waxaa laga heli karaa iibsiga. Version Trial ma laha oo dhan sifooyinka.
Coomrii Amos 3 May 2015
AlbumArtist uma shaqeeyo muddo dhowr sannadood ah hadda .... ciyaaryahanka waxa uu leeyahay mid ka mid ah UI ugu fiican ee aan abid arkay in ciyaaryahan kasta oo music u android !! Si kastaba ha ahaatee, shaqada albumartist (isticmaalo "albumartist" tag halkii ka mid ah "abwaan" tag ee "Artists" aragtida) uma shaqeeyo oo dhan (in kastoo ay tahay in bogga goobaha ee app !!!!), iyo horumarinta ayaa si aadan qofna arrintan .... muddo sanado ah !!! (Eeg forum taageerada ay) Google Play Music sax falaa, iyo sidoo kale GoneMad. Sida xaqiiqada ah waxaan soo iibsan doonaa nooca buuxda haddii ay abid hagaajin doonaa cayayaanka, laakiin hadda taas ma aysan dhicin.
SUX KALE BS APP. Si aad u hesho KULUL kasbadeen Ha JIIDHO Waayo, dhawaaqa ,, AT-ALL !! UNINSTALLING
Elias JFT 26 April 2015
Awesome weyn waxa ay tahay. Samaynaya fiican dhammaan goobaha. Ma doonaysaa in ka badan goobaha Hi-fi iyo fursad u dooran theme midabka. Ma doonaysaa in aad qarka u saaran waxa song info in la arki karo mar walba si waan ogahay samplerate ah oo aan haysan si ay u galaan menu ee track kasta. Waxaan jeclaan lahaa shir tagi ah buro koob. Marka laga soo tago kuwa liiska "diidaya" aad u yar waa audio ah ciyaaryahan ugu wanaagsan ee lagu iibiyo suuqa. Graphic visualizer A noqon lahaa shir tagi macaan = p. Masterpiece A DAACAD
Si aad noo soo baxay, Shuttle Music Player app app waa shanaad ugu wanaagsan ee music iibsiga online.
Gadashada music la Shuttle Music Player:
app waa mid aad u fudud oo user saaxiibtinimo. Eeg dhow ee shaashada ku dhex waxaad ka heli doontaa fursado sida Recent, Artists, Qaasaali iyo Songs. Riix tab ku haboon ee aad dooratay, ka dibna, raac tallaabooyinka fudud waxaa ku xusan.
Faa'iido: app waxay leedahay saacad hurdo, la dhisay-in goolkii barbaraha iyo dabacsanaan u mawduucyada dhowr garab music aan go'aynin.
Jonathan Valle dhawaad ​​kaamil ah! Wax walba oo ku saabsan ku saabsan app this waa la yaab leh! Waxaa jira kaliya hal wax ka. On albums qaybta Waxaan aaminsanahay waxa uu ku salaysan tag album, laakiin waxaad fadlan ka agdhisi karo tag artist heestii? Sababta oo ah waxa uu muujinayaa dhowr ah oo artist la mid ah tusaale ahaan Ariana Grande iyo qaybta kale Ariana Grande feat. Todobaadkii oo aan ka heli kartaa image dabool ah in. Waxa ay noqon lahaa wax fiican u Ariana songs kasta Grande ay ka mid yihiin kuwa soo muuqan kuwo kale lagu soo dari doono oo dhan galay mid ka mid artist qaybta!
Waa ciyaaryahan weyn music Waa app weyn, waxaan jeclaan fursadaha. Wax Kaliya waxaan jeclaan lahaa in aan fursad u ku widget ah shaashadda guriga aan telefoon halkaas oo aan isbedeli karaan heesaha oo halkii jiidaya guddiga wargelinta in wax laga beddelo. Haddii doorasho in ay jirto, wuxuu noqon lahaa app 5 Xiddig
Sunny Wu shaqeeyaa hab ka fiican tahay Google ee I0 laakiin kama ay helin fursad u EQ ah, laakiin waxay u shaqaysaa hab ka fiican tahay Google ayaa Music Player. Ugu yaraan inay hadda abaabulaan karaa playlists aan magac artist ama alfabeetada isugu iyo waxaan u tirtiri kartaa nuqul celiyaan muusikada saxda ah ee app ah!
App Tani ayaa hadana waxa la dhisay-in goolkii barbaraha in aan qabano wax soo saarka effortlessly.
Gadashada music bareejada:
Eeg dhow shaashada ee kor ku xusan. Waxaa u muuqda muuqataa daadsanaanta. Laakiin, aad si cad u qeexan tabs mid kale ka dib. Riix albums tab tusaale ahaan ka dibna raac tallaabooyinka sida la keeneen in doonaa iibsashada muusikada online.
Faa'iido: app waxaa badan jeclaa caashaqi jiray music ee aragtida ay barbaraha hadana dhisay-in.
Qasaarooyinka: Si ka duwan qaar ka mid ah ka horreeyay, app uusan soo free la functionalities ay ka buuxaan.
Good laakiin, ma beddeli karaa goobaha.
noqon, Isbeddellada Marka i bedeli barbaraha, xir app oo fur mar kale, goolka barbaraha ee had iyo jeer ku noqon, caadadii .. i neceb marka i furo app iyo mar kale beddeli goobaha .. sababta ay waxba kama uu badbaadin?
Waa mid ka mid ah music ciyaaryahan barnaamijyadooda wanaagsan ee loo yaqaan oo lagu qiimeeyo.
Gadashada music la Neutron Music Player:
RIGA waxaa si cad loogu soo bandhigay halkan dhinaca midig ee shaashada Android. Ka bilow Warsame Qaasaali iyo waxaa raac tilmaamaha.
Faa'iido: Waxay leedahay 32 - 64 jajabkii hadhay music haya'ad garab kelmadaha audio iyo xarunta processing iyo waafajinta in tiro ka mid ah qaababka.
Qasaarooyinka: Waa app lacag.
Weey wanaagsan tahay, markii ay u shaqayso Sure, waxa ay u muuqataa weyn. Cabbaar. Markaasaa waxaa u bidbidayaan. Ama go'aansado inuu "iloobin" maktabadda aan network music sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay rescan wax oo dhan, kuwaas oo markii aan waqti nasasho aan isku daygooda in ay shaqada barnaamijkan. Waxaan dib ugu DS Audio socda. Waxa kaliya ka shaqeeya.
A ciyaaryahan music istaahilaa lacagta. App cajiib. Runtii cut a kor ku xusan ugu fiican halkaas. Waxaan lahaa iPhone 4 wanaagsan ee u xaq u gaar ah, laakiin tani dhaafa ciyaaryahan kasta oo muusiko ah ee aan abid loo isticmaalo. haddana samaynaya hagaajin, si loo waafajiyo aan doorashada, taasi waa cajiib isticmaalo maalin walba. 2015 weli la isticmaalayo ciyaaryahan sida keliya ee aan ku kalsoonahay. Kaliya 4-beegyada uu hagaajin karo laakiin waa weyn loo customizable kor iyo hoos baaxadda spectrum ah. Ilaa hadda u ciyaara hishiis kasta geynta audio loo isticmaalo. Wax ka sarraysa tan raaxo loogu talagalay audio run.
tayada sare dhawaaq, ka dib markii uu 20 ciyaaryahan oo aan waxtar lahayn ugu danbeyn helay mid ka mid tayo Dhawaqa ayaa ogaaday, qulquli karaan in qalab kasta oo ay ka mid yihiin xbmc / kodi. Ugu dhakhsaha badan Bilowday music sida waxaan bilaabay gaari oo Bluetooth ku xiran. Lo'da oo keliya ma jirtaa uma muuqato in ay alifbeetada ah ee kitaabkii duudduubnaa. Laakiin marka la barbar dhigo inta kale, oo ay ugu fiican. Carar ku cyanogen mod 12.
Waa galooti cusub ee app suuqa music la interface gaar ah.
app waa user saaxiibtinimo. Tabs waxaa si cad u soo bandhigay aad screen Android.
Faa'iido: user interface Awesome la 3D saamayn dhawaaqa, tag tafatirayaasha, saacad hurdo iyo qaababka badan oo dheeraad ah.
Qasaarooyinka: Waa app lacag; laakiin waxay bixisaa 10 maalmood mudo tijaabo la muuqaalada buuxa.
Maxaa dhacay ?! Waxaan leeyahay version xidhin oo inta badan app waa mid aad u wanaagsan oo ku saabsan inuu i tags beddelo si Waxaan abaabuli karaa music laakiin sabab qaar ka mid ah waxaa kaliya oo aan ka shaqeyn doonaan, isla daboolida album ah, oo innaba iyaga ma ka bedeli kartaa. Waxaan kaliya farabadan of music cusub oo aan telefoonka oo aan maktabadda waa daadsanaanta. Waxaan isku dayay ugu galaan goobaha maktabadda iyo beddelo sida ay wax u kala soocaa laakiin waxba u muuqataa in ay ka shaqeeyaan. Fadlan caawi ama update ama wax sidaas ayaan idin ​​siin karaa guys in 5 xiddiga rating dib!
u isticmaala in ay dhibaatooyin aad u badan oo ka wanaagsan iyadoo dhowr updates soo dhaafay. Tahay Album baaba'aa marka telefoonka waxaa rebooted oo Waa inaad mar kale soo bixi. Player Fariisiyo qayb ilaa xad ah. No casriga ah supprt. Quraan iyaga laakiin jawaab u lahayn in ay. Ayaa la isticmaalayo version bixiyaa stock LG G3 laakiin tirtiri doonaa oo isticmaali ciyaaryahan oo kala duwan.
wanaagsan. Fadlan hagaajin. Iyadoo version ugu dambeeyay, gabayadayda annagoo u ciyaari doonin oo ku saabsan Daqiiqad ama laba iyo si lama filaan ah loo joojiyo. Waxaan ku dhacay mar kale ka ciyaaro oo sii halkaas oo ay iska daayeen. Dhaca quruxsan si joogta ah haatan. Waa maxay ii ahaa ciyaaryahan music jecel on my Note 4 hadda ku noolyihiin. Fadlan hagaajin.
9) Gantaal Player:
Sababtoo ah qaar ka mid ah qaababka ay weyn, app tani waa mid ka mid ah oo caan ah oo ku saabsan Android.
app waa user saaxiibtinimo. RIGA waxaa si cad loogu soo bandhigay aad screen Android ku gabagabayso iibsiga.
Faa'iido: Waxay leedahay taageero codec weyn leh dabacsanaan si ay u kala duwan oo ka mid ah qaabab music.
Qasaarooyinka: interface ayaa u muuqdo xoogaa qaabkii.
ha soo gadan Full Version Waxay aad har qaabka ay u caawiyaan macaamiisha ay yihiin. Updated iyo hadda aan lumiyay tahay aan album dhan iyo marka aan raadinta image ay doonayaan ii bixin mar sanad walba muuqaal aan hore u bixisay markii aan ku iibsaday nooca buuxda. Waxa ay u muuqataa sida ay adiga kuu qiyaanadii galay iibsato nooca buuxda oo taxaya tahay album aan xad lahayn oo markaas iska qaato oo hadda dareensan yihiin in aan qaaday. Waxaan bixisay waxba sababtoo ah waa dhan ay bixiyey nooca buuxda. Sidaas waxa kama aan bixiyo? Waxay arxan yihiin
marka laga reebo waxyaabo yaryar Great siin lahaa 5 haddii music joojin wouldnt qeybtii labaad ee u dhexeeya heeso iyo marka aan ka boodo in ay ka qeyb gaar ah oo hees oo "dambaysaa" qeybtii labaad ee ciyaarta mar kale, oo aan ka ahayn iyocadhadii u muuqda si aad u ogaato wixii kale oo dhibaatooyin! ************************************* Edit: taageerada casriga ah ay mahad u suurtagashay in ay u xaliyo arimo yar , 5 stars!
Nacaybka nooca ugu dambeeya! Waa maxay sababta ay sameeyeen daadsanaanta la app weyn? Iyadoo version ugu dambeeyay, waxa ugu darn weli waa uu socdaa ee asalka ah xitaa ka dib markii gacanta loo xidhay. Isbedel u lahayn in ay playlists waxaan sameeyey laakiin waxay ALL la waayay oo la casriyayn ah. Isyncr via USB mar dambe u shaqeeyo. Sure jeclaan lahaa ayaan si toos ah updated. Version Old ma lahayn arrimaha
FlipBeats Music Player la suuq sida app cusub jiilka music.
Sida aad ka arki on shot shaashadda, ee isha ku habboon ayaa la soo bandhigay aad screen Android ku gabagabayso iibsiga.
Faa'iido: Waxay leedahay urur multi barbaraha graphic weyn iyo interface soo jiidasho leh.
★★★★★ www.LifeHacker.com - "FlipBeats waa wanaagsan raadinaya, tilmaam Music ah Powered Player u Android"
★★★★★ www.AndroidGuys.com - "FlipBeats, helitaanka ugu soo baxay aad music"
★★★ ★★ www.Engadget.com - "FlipBeats: music miidda ah ciyaaryahanka app for Android"
> Resource > Android > Sida loo iibso Music on Android ee Android Apps?